ကူမင်းမြို့မှာ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရောက်ခဲ့တယ် - 编辑推荐 - 云桥网缅文
ကူမင်းမြို့မှာ စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင် ရောက်ခဲ့တယ်
2019-07-25 18:39:55 |သတင်းအရင်းအမြစ် LMp
ကူမင်းမြို့ဟာစာပေအနုပညာအနှစ်သာရနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့ မြို့တစ်မြို့ပါ။ စာအုပ်ဆိုင်ကို မြို့ပြရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်အနေနဲ့ ရှုမြင်ထားပါတယ်။ စာအုပ်ဆိုင်မှာလူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တွေ့သလိုလူတစ်ယောက်နဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်တွေ့ဆုံလိုက်ပြီဆိုရင် စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
The Elephant Books-- စာဖတ်သူရဲ့ ကော်ဖီဆိုင်
နေရာ။ ။ ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြား（Wenhua Alley）အမှတ် ၇ အဆောင်အတွင်း
ဒီစာအုပ်ဆိုင်ဟာယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြား（Wenhua Alley）အမှတ် ၇ အဆောင်ရဲ့ မြေအောက် ပထမထပ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အသိအကျွမ်းကလမ်းပြမပေးလို့ရှိရင်လည်းကံကောင်းစွာနဲ့ဒီဆိုင်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ The Elephant Booksစာအုပ်ဆိုင်ဆိုတော့ စာအုပ်ရောင်းတာထက် ယဉ်ကျေးမှုအနှစ်သာရနဲ့ ပိုပြီး ပြည့်နှက်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ bar နဲ့ စာအုပ်စင်ကိုသီးခြားခင်းကျင်းထားပါတယ်။ စာအုပ်ဖတ်ရင်းကော်ဖီသောက်ရင်းအားလပ်တဲ့ နေ့ခင်းပိုင်းချိန်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။
စာအုပ်နဲ့ ကော်ဖီအပြင် The Elephant Booksမှာစာဖတ်ပွဲ၊ လက်မှတ်ရေးထိုးစာအုပ်ရောင်းပွဲစတာတွေကိုအစဉ်သဖြင့် ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။ စာပေယဉ်ကျေးမှုစကားဝိုင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကိုရံဖန်ရံခါကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ ကူမင်းမြို့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ စာပေအနုပညာလေ့လာရာနေရာလို့ ချီးမွမ်းပြောဆို ကြပါတယ်။
Wheatfield Bookstore--စာပေအနုပညာလူငယ်ရဲ့ ဧည့်ခန်း
နေရာ။ ။ ဝိန်လင်လမ်းကြောင်း (Wenlin Street) ထျိန်ချွန်လမ်းကြား
Wheatfield Bookstoreဟာယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြား（Wenhua Alley）ရဲ့ လမ်းဆုံမှာရှိပါတယ်။ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကုန်စုံဆိုင်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဒီစာအုပ်ဆိုင်ဟာမထင်ရှားလှပါဘူး။ (၁၀)နှစ်ကျော်သက်တမ်းမှာဒီစာအုပ်ဆိုင်ဟာမွန်းတည့်(၁၂)နာရီမှာပဲစဖွင့်တယ်။ ဒီစာအုပ်ဆိုင်ကချောင်ကျပေမယ့် "တရုတ်အကောင်းဆုံးစာအုပ်ဆိုင်"လို့ ချီးမွမ်းပြောဆိုကြပါတယ်။ "ကူမင်းစာပေအနုပညာမြေပုံ"လို့လည်းဂုဏ်ပြုခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။
Wheatfield Bookstoreဟာ ၁၇ စတုရမ်းမီတာပဲကျယ်ဝန်းပါတယ်။ စာအုပ်တွေအပြင် စာဖတ်သူသုံးလေးယောက်ပဲဆံပါတယ်။ တော်တော်လေးကျဉ်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဆိုင်က ကြည့်ရတာတော်တော်လေးရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ရဲ့နာမည် ပြောလိုက်ရင် ပိုင်ရှင်ကစာအုပ်ကိုချက်ချင်းရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။
Mandarin Books--နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ "မိတ်ဆွေဟောင်း"
နေရာ။ ။ ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြားအမှတ်(၅၂)（Sub-no. 8, No. 52, Wenhua Alley）
Mandarin Books စာအုပ်ဆိုင်မှာတရုတ်နဲ့အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာဖြင့် ဆိုင်းဘုတ်၊ ရှေးဟောင်းစာအုပ်စင်တွေ၊ ပေါများကြွယ်ဝတဲ့ စာအုပ်တွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ဆိုင်ဟာကူမင်းမြို့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ "ရှေးဟောင်းစာပေအနုပညာစာအုပ်ဆိုင်"ဖြစ်တယ်လို့ အသိအမှတ် ပြုကြပါတယ်။
Mandarin Books စာအုပ်ဆိုင်ဟာ နိုင်ငံခြားဘာသာစာအုပ်တွေဖြင့် နာမည်ကျော်ကြားပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုလမ်းကြား（Wenhua Alley）မှာဖွင့်တာ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ။ လာရောက်အားပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေဟာကူမင်းမြို့ဒေသခံတွေတင်မဟုတ်ပဲကူမင်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းလာကြတယ်။
ဒီမှာခင်းကျင်းရောင်းချတဲ့စာအုပ်တွေဟာ နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။ တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးကုသနည်းမှ ခရီးသွားလာရေးနယ်ပယ်အထိတရုတ်ဘာသာလေ့လာရေးစာအုပ်တွေလည်းမြေညီထပ်မှာရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဒုတိယထပ်မှာဥရောပနဲ့အမေရိကတိုက်မှာအသုံးပြုတဲ့ ပြင်သစ်ဘာသာ၊ ဂျာမန်ဘာသာ၊ စပိန်ဘာသာမှ အာရှတိုက်မှာအသုံးပြုတဲ့ ဂျပန်ဘာသာ၊ ကိုရီးယားဘာသာတွေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ မူရင်းနိုင်ငံခြားစာအုပ်တွေ ထွေပြားစုံလင်လှပါတယ်။